Mask Detection Instrument Factory - China Mask Detection Instrument ထုတ်လုပ်သူများ၊
DRK227 Touch Color Screen Mask သွေးထိုးဖောက်မှု စွမ်းဆောင်ရည် စမ်းသပ်ကိရိယာ
စမ်းသပ်သည့်အရာများ- သွေးထိုးဖောက်မှု စွမ်းဆောင်ရည် စမ်းသပ်ခြင်း Touch colour screen mask သွေးထိုးဖောက်မှု စွမ်းဆောင်ရည် စမ်းသပ်သူ (ယခုနောက်ပိုင်းတွင် တိုင်းတာခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှု တူရိယာအဖြစ် ရည်ညွှန်းသည်) သည် နောက်ဆုံးပေါ် ARM မြှုပ်သွင်းထားသော စနစ်၊ 800X480 ကြီးမားသော LCD ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု အရောင်ပြကွက်များ၊ အသံချဲ့စက်များ၊ A/D converters များနှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများကို လက်ခံပါသည်။ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ပြတ်သားမှုမြင့်မားသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုလက်ခံကျင့်သုံးပါ၊ မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်ကိုအတုယူပါ၊ ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု၊ စမ်းသပ်မှုကိုအလွန်တိုးတက်စေသည်...
DRK-1000A အမျိုးအစား သွေး-ပေါက်သော ရောဂါပိုး ကူးစက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး စမ်းသပ်ကိရိယာ
စမ်းသပ်သည့်အရာများ- သွေးမှသယ်ဆောင်လာသော ရောဂါပိုးများကို ထိုးဖောက်စမ်းသပ်ခြင်း ဤကိရိယာသည် သွေးနှင့်အခြားအရည်များဆီသို့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ၀တ်အထည်များ၏ စိမ့်ဝင်နိုင်မှုကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။hydrostatic pressure test method ကို ဗိုင်းရပ်များနှင့် သွေးနှင့် အခြားအရည်များကို အကာအကွယ်အဝတ်အစားပစ္စည်းများ၏ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်းကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။သွေးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အရည်များသို့ အကာအကွယ်အ၀တ်အထည်များ၏ စိမ့်ဝင်နိုင်မှုကို စမ်းသပ်ရန်၊ သွေးတွင်းရောဂါပိုးများ (Phi-X 174 ပဋိဇီဝဆေးဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်း)၊ ဓာတုသွေး စသည်တို့ကို စမ်းသပ်ရန် အသုံးပြုသည်။
Shandong Derek Instrument Co., Ltd. မှ ထုတ်လုပ်သော ယိုစိမ့်မှုနှုန်း စမ်းသပ်ကိရိယာသည် အလားတူ နိုင်ငံခြားစက်ပစ္စည်းများကို ရည်ညွှန်း၍ မိမိကိုယ်ကို စုပ်ယူထားပြီး ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါသည်။၎င်းသည် GB2626-2019 "အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကာကွယ်မှု self-priming filter အမျိုးအစား anti-particulate respirator" 6.4 Leakage rate၊ စစ်ထုတ်ခြင်းထိရောက်မှုနှင့် မီးခိုးထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စစ်ထုတ်သည့်ဒြပ်စင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စက်ကို အခြေခံထားသည်။၎င်းသည် corn aerosol generator နှင့် photomet ကိုအသုံးပြုသည်...
စမ်းသပ်ပစ္စည်းများ- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပွတ်တိုက်မှုများကြောင့် အရည်သယ်ဆောင်သည့်ဘက်တီးရီးယားများ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းမှ အကာအကွယ်ပေးခြင်း DRK-1071 Moisture Resistance Microbial Penetration Tester ကို ဘက်တီးရီးယားများ၏ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို တွန်းလှန်ရန်အတွက် ဆေးဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားထိုးဖောက်ခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပွတ်တိုက်မှုခံရသောအခါအရည်၌။အကာအရံ စွမ်းဆောင်ရည်)။ထုတ်ကုန်စံနှုန်းများ YY/T 0506.6-2009 "ခွဲစိတ်ခန်းသုံးအ၀တ်အထည်များ၊ ခွဲစိတ်ခန်းသုံးဝတ်စုံများနှင့် ...
ရှူသွင်းထားသောဓာတ်ငွေ့တွင် DRK265 ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပါဝင်မှု ထောက်လှမ်းကိရိယာ (ဥရောပစံ)
စမ်းသပ်သည့်အရာများ- ရှူသွင်းထားသော ဓာတ်ငွေ့တွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပါဝင်မှုကို ထောက်လှမ်းခြင်း ရှူသွင်းထားသော ဓာတ်ငွေ့တွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပါဝင်မှု ထောက်လှမ်းသည့်ကိရိယာကို အပြုသဘောဆောင်သော ဖိအားမီးသတ်လေရှူကိရိယာ၏ dead space test ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။အသက်ရှုကိရိယာ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် အမျိုးသား အလုပ်သမား အကာအကွယ်ပေးရေး ကိရိယာ စစ်ဆေးရေး အေဂျင်စီများ တွင် ကိုယ်တိုင်ပါရှိသော အဖွင့်-ပတ်လမ်း ဖိသိပ်ထားသော လေရှူစက်များ၊ ဆက်စပ် စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အခြား ထုတ်ကုန်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။1. စက်ကိရိယာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပါဝင်မှု...
စမ်းသပ်သည့်အရာများ- ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၏ filtration efficiency နှင့် airflow resistance သည် DRK506F particle filtration efficiency (PFE) tester (dual photometer sensor) ကို ဖန်ဖိုင်ဘာကဲ့သို့ အမျိုးမျိုးသော မျက်နှာဖုံးများ၊ အသက်ရှုကိရိယာများနှင့် ပြားချပ်ချပ်ပစ္စည်းများ၊ ဖန်မျှင်ကဲ့သို့သော filtration efficiency ကို လျင်မြန်၊ တိကျစွာနှင့် တည်ငြိမ်စွာသိရှိနိုင်ရန် အသုံးပြုပါသည်။ , PTFE, PET, နှင့် PP အရည်ပျော်-မှုတ် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ နှင့် လေ၀င်လေထွက် ခုခံမှု။စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်- EN 149-2001 နှင့် အခြားစံနှုန်းများ။အင်္ဂါရပ်များ- 1. တိကျမှုမြင့်မားသော တင်သွင်းလာသော အမှတ်တံဆိပ်ကွဲပြားမှုကို အသုံးပြုခြင်း...